ဧရာဝတီစာကြည့်တိုက်: ချွေးထုတ်ပြီး အဆိပ်အပုပ်ရှင်းထုတ်နည်း (၁)
သင့်ခန္ဓာကိုယ် လေးလံထိုင်းမှိုင်းတယ် ၊ မျက်နှာမွဲခြောက်တယ် ။ စိတ်လေးလံနေတယ် ဆိုလျှင် ဒါတွေကို ပပျောက်စေဖို့ အထိရောက်ဆုံး နည်းကတော့ ပေါ့ပါး ပျော်ရွှင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အဆိပ်အပုပ် ရှင်းထုတ်နည်းပါပဲ. . . . နေ့တိုင်း အချိန်တိုင်းမှာ အဆိပ်အပုပ် ရှင်းထုတ်နည်း တစ်မျိုးမျိုးကို ရွေးချယ်လုပ်ဆောင် ပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှု အာနိသင့်ကို လည်း လက်တွေ့ ခံစားကြည့်ပါ. . .
မိမိခန္ဓာကိုယ်ရှိ အဆိပ်အပုပ်များကို ချွေးထုတ်ခြင်းဖြင့် လည်း ရှင်းထုတ်နိုင်ပါသည်
အစာခြေလမ်းကြောင်း၊ ဆီးစွန့်လမ်းကြောင့် နှင့်ချွေးဂလင်းတို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အဆိတ်အပုပ် စွန့်ထုတ်ရာ လမ်းကြောင်းကြိး ၃ ခုဖြစ်ပါတယ်. . . အဆိပ်အပုပ်တွေ ရှင်းထုတ်အားမြင့်မားဖို့ ၊ ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပသို့ အချိန်မှီ စွန့်ပစ်နိုင်ဖို့ ဆိုလျှင် ဒီလမ်းကြောင်း ၃ ခု ပွင့်နေရပါမယ်. . . ဒါဟာရောဂါ ကာကွယ်ရေးနှင့် ခန္ဓာကိုယ် ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်ပါသည်။.
ချွေးထွက်တဲ့ နည်းနဲ့ အဆိပ်အပုပ်ကို စွန့်ထုတ်တာဟာ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က မျက်နှာပြင် ဧရိယာ အကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ အရေပြားကို အသုံးပြုခြင်းပါပဲ. . . . တစ်ကိုယ်လုံးက အမွေးကျင်းတွေ အားလုံး ပွင့်ပြီး ချွေးတွေ ဖြိုင်ဖြိုင်ကျလာခြင်းဖြင့် ချွေးရည်နဲ့အတူ အဆိပ်အပုပ်များကိုလည်း ပါသွားနိုင်ပါသည်. .
ချွေးထွက်ခြင်းကြောင့် တစ်ကိုယ်လုံးက အကြောအခြင်နှသ့် အခိုးဓာတ်ကိုပွင့်စေပါသည် . ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါက လီစာများကို ပိုအလုပ်လုပ်စေပါသည်. . စိတ်အားနှင့် ခွန်အားများကို ပွားစေသည်. ထို့အပြင် အသိမဲ့ အာရုံကြောရဲ့ စွမ်းရည်ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးသည် သွေးကြောငယ်များကို ပိုကျယ်စေတဲ့ အတွက် သွေးလှည့်ပတ်မှု အားကောင်းစေတယ်လို့ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးပညာက ဖွင့်ဆိုထားပါသည်။
ကျန်းမာသူတစ်ဦးဟာ သင့်တင့်စွာ ချွေးထုတ်နိုင်လျှင် သွေးလှည့်ပတ်မှုကို ကောင်းစေခြင်း ၊ အာရုံကြောကို သန့်စေခြင်း ၊ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းရည်အရပ်ရပ်ကို တိုးစေခြင်းများအတွက် များစွာ အကျိုးရနိုင်ပါသည်။
ချွေးထုတ်ပြီး အဆိပ်အပုပ် များကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ရှင်းထုတ်ရာတွင် ပထမနည်းမှာ -
ကျန်းမာသူတစ်ဦးအတွက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီးချွေးထုပ်ခြင်း ဟာ အကျိုးအများဆုံးပါပဲ. . . ကိုယ်လက်လှုရှားအားကစားပြုတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ကြွက်သားများမှ ကယ်လိုရီများ လျင်မြန်မြောက်များစွာထွက်လာနိုင်ပါသည် . . . အပူများ အမြန်ပျံ့လွှင့်စေရန်အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ချွေးစို့ခြင်း (သို့) ချွေးဒီးဒီးကျခြင်းများ ဖြစ်လာပါတယ်. . . ထွက်လာသော ချွေးရည်နဲ့အတူ အဆိပ်အပုပ်တွေ ပါသွားလို့ လူကို ပေါ့ပါးသွက်လက်စေပါတသည်. . . အကိုက်အခဲပျောက်ပြီး ရောဂါမျိုးစုံကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။
မိမိရဲ့ ခံနိုင်ရည်ကို ချင့်ချိန်ပြီး သင့်လျော်တဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားအားကစားနည်းကိုရွေးချယ်ပြီး ချွေးထွက်သိပ်မများအောင် ဂရုစိုက်ပါ မျက်နှာတွင် ချွေးစီးကျပြီး ရင်နှင့်ကျောပိုင်းတွင် ချွေးစို့လာလျှင် နောက်ထပ် 10 မိနစ် ခန့်ကစားပြီး ရပ်နားပါ. ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် ၅-၆ ကြိမ်ပြုလုပ်ပါ . . ထို့နောက် အရေပြား ပိတ်ဆို့မှုမဖြစ်အောင် အချိန်မှီရေချိုးပါ။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီး ချွေးထုတ်ရာတွင် အောက်ပါအချက်များကို သတိထားပါ.
(၁) ကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်နဲ့ သင့်တော်မည့် အားကစားနည်းကိုသာရွေးပါ။ ပြေးခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း၊ ပင်ပေါင်ရိုက်ခြင်း၊ တောင်တက်ငြခ်း၊ ဒစ္စကိုကခုန်ခြင်းနှင့်ခြေမှတ်ခြင်းများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
(၂) ကိုယ့်ရဲ့ခံနိုင်ရည်အရ လှုပ်ရှားမှုပမာဏကို ချင့်ချိန်ပါ. ခံနိုင်ရည်အားကို ကျော်ပြီးမလုပ်ပါနှင့်။
(၃) ချွေးတဒီးဒီးကျတဲ့ အဖြစ်မျိုးကိုရှောင်ပါ. မျက်နှာပါးပြင်တွင် ချွေးစီးကျတာနဲ့ ရပ်နားသင့်ပါတယ်.
(၄) ချွေးထွက်ပြီးနော်က အ၀တ်အစားများကို ချောင်အောင်လျှော့ခြင်း ၊ ချွတ်ပစ်ခြင်းများ လုပ်ပါ ၊ ချွေးခြောက်ပြီး အေးလာသလိုခံစားရတဲ့အခါ အအေးမမိအောင် အ၀တ်အစားထပ်ဝတ်ပါ. . ညင်သာတဲ့ ကိုယ်လက်ဖြေလျှော့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးရပ်နားပါ။
ကျန်သည့် အဆိပ်အပုပ်ရှင်းထုတ်နည်းများကိုလည်း ဆက်လက်ဖော်ပြသွားပါမည်။
ရေးသားသူ Anonymous at Saturday, April 28, 2012
Anonymous April 28, 2012 at 4:05 PM
မြစ်ကျိုးအင်း May 9, 2012 at 11:34 PM
အနည်းဆုံးတော့ ကစားကွင်း ပါတ်ပြေးတာလောက်တော့ လုပ်ဖြစ်တယ်။
ကိုကိုမောင်(ပန်းရနံ့) May 13, 2012 at 5:41 AM
စမ်းသပ်ကြည့်ရဦးမယ်။ ခန္ဓာကိုယ် မလန်းမဆန်းဖြစ်နေလို့။
Shwe Sakarr October 9, 2013 at 4:48 AM
lu ka lay July 7, 2015 at 6:09 PM
ဘုရားနောက်တော်ကလိုက်၍ သားတော်ရာဟုလာ အမွေတောင်းပုံ